သူမကို တကယျခဈြရငျ ဒါတှမေလုပျနဲ့ – Shinyoon
သူမကို တကယျခဈြရငျ ဒါတှမေလုပျနဲ့
တကယျခဈြရငျ … မလိမျပါနဲ့ ။
ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဘယျအရာကိုမဆို သိခငျြကွတာဟာ မျိနျးကလေးတှရေဲ့ သဘာဝပါ ပြျောစရာပဲ ဖွဈဖွဈ ၀မျးနညျးစရာပဲ ဖွဈဖွဈ အတူတူမြှဝခေငျြကွတာခညျြးပါပဲ ။ ဘယျလိုအမှနျတရားမြိုးကိုမဆို ကိုယျ့ခဈြသူ ပွောပွတဲ့အခါမှ ပိုပွီး သိခငျြကွတယျ ကြှနျမကို လိမျထားတဲ့အရာကို တဈခွားတဈယောကျက ပွနျပွောမှ သိရတဲ့အဖွဈဟာ တကယျတမျးကတြော့ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမထားရာ ရောကျပါတယျ ။
တကယျခဈြရငျ …. ပွီးပွီးရောရော ပေါ့ပကျြပကျြမပွောနဲ့
စိတျဆိုးနတေဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ စိတျကောကျနတေဲ့အခါ ပဲဖွဈဖွဈ စိတျဆိုးပွရေငျပွီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ ကတိတှကေို ပေါ့ပကျြပကျြမပေးနဲ့ စကားတှကေို ပွီးပွီးရောရောမပွောနဲ့ မိနိးကလေးဆိုတာမြိုးက ဘာမဟုတျတာလေးက အစ အလေးအနကျထားပွီး မြှျောလငျ့တတျကွတာလေ ။ ဖွဈမလာတဲ့အခါ ပိုပွီးအယုံအကွညျမဲ့သှားတတျတယျ
တကယျခဈြရငျ … တခွားမိနျးကလေးနဲ့ မနှိုငျးနဲ့ …
တခွားတဈယောကျအကွောငျးကို ကိုယျ့ခဈြသူ က ကိုယျ့ကို ပွောနတေဲ့အခါ ဘယျလို အငျအားမြိုးနဲ့ နားထောငျရမလဲ ဆိုတာ စာနာပါ ။ မိနျးကလေးဆိုတာမြိုးက တခွားသူတှေ ဘာတှပေဲ ပွောပွော ခံနိုငျရညျရှိတတျကွပမေယျ့ တခွားတဈယောကျနဲ့ အနှိုငျးယှဥျ ခံနိုငျလောကျတဲ့အထိ မသနျမာကွဘူး ။
တကယျခဈြရငျ …. ခံစားခကျြတှကေို မလှောငျပါနဲ့
မိနျးကလေးတဈယောကျမှာ တကယျ အတညျပေါကျနဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့တဲ့အခိုကျအတနျ့တှေ ရှိတယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျလေးခဏမှာ ခဏလောကျပဲဖွဈဖွဈ လေးလေးနကျနကျလေး နားထောငျပေးပါ ။ ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ မလှောငျပါနဲ့ နောကျတဈခေါကျ ဘာအကွောငျးမှ မပွောပဲ နှုတျဆိတျနမေိလိမျ့မယျ ။
တကယ်ချစ်ရင် … မလိမ်ပါနဲ့ ။
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို သိချင်ကြတာဟာ မ်ိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝပါ ပျော်စရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းနည်းစရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတူတူမျှဝေချင်ကြတာချည်းပါပဲ ။ ဘယ်လိုအမှန်တရားမျိုးကိုမဆို ကိုယ့်ချစ်သူ ပြောပြတဲ့အခါမှ ပိုပြီး သိချင်ကြတယ် ကျွန်မကို လိမ်ထားတဲ့အရာကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က ပြန်ပြောမှ သိရတဲ့အဖြစ်ဟာ တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားရာ ရောက်ပါတယ် ။
တကယ်ချစ်ရင် …. ပြီးပြီးရောရော ပေါ့ပျက်ပျက်မပြောနဲ့
စိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကောက်နေတဲ့အခါ ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးပြေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကတိတွေကို ပေါ့ပျက်ပျက်မပေးနဲ့ စကားတွေကို ပြီးပြီးရောရောမပြောနဲ့ မိနိးကလေးဆိုတာမျိုးက ဘာမဟုတ်တာလေးက အစ အလေးအနက်ထားပြီး မျှော်လင့်တတ်ကြတာလေ ။ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ပိုပြီးအယုံအကြည်မဲ့သွားတတ်တယ်
တကယ်ချစ်ရင် … တခြားမိန်းကလေးနဲ့ မနှိုင်းနဲ့ …
တခြားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ကိုယ့်ချစ်သူ က ကိုယ့်ကို ပြောနေတဲ့အခါ ဘယ်လို အင်အားမျိုးနဲ့ နားထောင်ရမလဲ ဆိုတာ စာနာပါ ။ မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက တခြားသူတွေ ဘာတွေပဲ ပြောပြော ခံနိုင်ရည်ရှိတတ်ကြပေမယ့် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အနှိုင်းယှဉ် ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိ မသန်မာကြဘူး ။
တကယ်ချစ်ရင် …. ခံစားချက်တွေကို မလှောင်ပါနဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ တကယ် အတည်ပေါက်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေ ရှိတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်လေးခဏမှာ ခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေးလေးနက်နက်လေး နားထောင်ပေးပါ ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ မလှောင်ပါနဲ့ နောက်တစ်ခေါက် ဘာအကြောင်းမှ မပြောပဲ နှုတ်ဆိတ်နေမိလိမ့်မယ် ။